သင်၏ WordPress ရှာဖွေမှုကို WPSOLR မည်သို့ကယ်တင်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ
အတွက် WordPress ရှာဖွေရေးပလပ်အင်
Addons (Plugins၊ အခင်းအကျင်း၊ အင်္ဂါရပ်များ)
ပင်မစာမျက်နှာ » အဘယ်ကြောင့် WPSOLR?
ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီ WordPress ရှာဖွေခြင်းကို WPSOLR ရှိသည့် Fortune ၅၀၀ ကုမ္ပဏီများအတွက်သီးသန့်ထားရှိပါသည်
သင်၏ရှာဖွေမှုသည်သင်၏ WordPress ဆိုဒ်ကိုချိုးဖျက်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာရေးသားချက်များ (သို့) ထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်လျှင်သို့မဟုတ် visitors ည့်သည်များသည်တိကျမှန်ကန်သောရလဒ်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။
WordPress ကို vs WPSOLR
အဘယ်ကြောင့်စင်ကြယ်သော plugins ကိုမ
WordPress ကို MySQL ဖြင့်ရှာဖွေပါ
Apache Solr နှင့် WordPress ရှာဖွေခြင်းကို WPSOLR မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ကိုနားလည်ရန် WordPress ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ၏လျှို့ဝှက်ကမ္ဘာတွင် ဦး စွာအနည်းငယ်ရေငုပ်ကြည့်ကြပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုအချိန်အကြာကြီးနားလည်ထားပါက WPSOLR ကိုတပ်ဆင်ရန်သင် ပို၍ လက်နက်ကိုင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့သွားကြကုန်အံ့!
ဤတွင် (ရိုးရှင်းသော) စံ WordPress ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာအဆင့်များ၊ အထက်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်လည်းဖော်ပြသည်။
စာမျက်နှာတစ်ခုတင်သည်ဥပမာအားဖြင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ link တစ်ခုကို နှိပ်၍ အသုံးပြုသူမှဖြစ်သည်။
WordPress အဓိက စာမျက်နှာ url ကိုထုတ်ယူသည်ကအားလုံးကို parameters တွေကိုအတူ။ ဥပမာ: /? s = အနီရောင် + ဖိနပ်နှင့် post_type = ထုတ်ကုန်တစ်ခု WooCommerce ရှာဖွေရေးအတွက်။
url parameters တွေကိုရန်အသုံးပြုကြသည် WP_Query အရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ, SQL query များကိုတည်ဆောက်ရန်အဆင့်မြင့် WordPress api ။
WordPress ကိုထုတ်လုပ်သည် WP_Query မှ SQL ကြေငြာချက်တစ်ခုနှင့်မှန်ကန်သော SQL dialect (MySQL, PostgreSQL, ... ) ဖြင့်ဒေတာဘေ့စကိုခေါ်သည်။ ဤ SQL သည်မကြာခဏရှုပ်ထွေးပြီး၊ စားပွဲများ၏အရောင်နှင့်အရွယ်အစားကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ထုတ်ကုန်များနှင့် attribute များကဲ့သို့သော SQL ဇယားများမှရလဒ်များကိုပေါင်းစည်းသည်။
အဆိုပါ WordPress ကိုဒေတာဘေ့စ အဆိုပါ SQL ကြေညာချက်ကိုစီရင်နှင့် WP_Query အရာဝတ္ထုတွင်သိမ်းထားသောရလဒ်များကိုပြန်ပို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရလဒ်များကိုသာပြန်လည်ရရှိသောရလဒ်များသည်အခြားရလဒ်အသေးစိတ်များကိုရယူရန်အတွက် SQL သည် ပိုမို၍ လုပ်ဆောင်စေလိမ့်မည်ဟုသတိပြုပါ။
ယခု WordPress ကိုစတင်မည် template တစ်ခုဆိုသည့် php ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ။ template ကိုလက်ရှိ active theme directory တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ မည်သည့် template ကို load လုပ်သည်ကိုမူတည်သည် template ကိုအဆင့်ဆင့် (urls နှင့် template ဖိုင်အမည်များကိုချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခု) သို့မဟုတ်အခင်းအကျင်းသို့မဟုတ်ပလပ်အင်စစ်ထုတ်သည့်အရာများ (သို့) search.php မှအမျိုးအစားစာရင်းများ၊ tags များစာရင်းနှင့်များစွာသောရှာဖွေခြင်းပုံစံများရှိကြောင်းသတိပြုပါ။
WPSOLR ဖြင့် WordPress ရှာဖွေပါ
ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ စံ WordPress ရှာဖွေရေးကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များမှာ
WPSOLR သည် WP_Query အရာဝတ္ထုကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် subclass အရာဝတ္ထု WPSOLR_Query ဖြင့်အစားထိုးနေသည်။
WPSOLR_Query မှ parameter များကို url မှထုတ်ယူနေသည် WPSOLR PRO extension များ, ဒါမှမဟုတ်ထံမှ သင့်ကိုယ်ပိုင်စစ်ထုတ်ကုဒ်.
WPSOLR သည် Elasticsearch / Solr query ဖြင့်တည်ဆောက်သည် Elastica php စာကြည့်တိုက် / Solarium php စာကြည့်တိုက်.
WPSOLR သည်ရှာဖွေမှုနှင့်ကိုက်ညီသောစာရွက်စာတမ်းများရရှိရန် Elasticsearch / Solr အညွှန်းကိန်းကိုမေးမြန်းသည်။
WPSOLR သည် SQL ကြေငြာချက်တစ်ခုနှင့် WordPress ဒေတာဘေ့စ်မှပို့စ်အမျိုးအစားများ (စာမူ၊ စာမျက်နှာ၊ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စာမူအမျိုးအစားတစ်ခုခု) ကိုပြန်လည်ရယူသည်။
WPSOLR သည်စာမူအမျိုးအစားများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် - geolocation အကွာအဝေး၊ ကောက်နှုတ်ချက်တွင်မီးမောင်းထိုးပြသောသော့ချက်စာလုံးများ၊
အခင်းအကျင်း၏ရှာဖွေမှုပုံစံကိုဖွင့်သောအခါ၊ ပုံမှန်အတိုင်းပြုမူသည်၊ WordPress စံကွင်းဆက်မှစာမူအမျိုးအစားများသည်ပထမဆုံးအားဖြင့် Elasticsearch / Apache Solr query မှလာသည်ကိုသတိမပြုမိပါ။
ယခုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုစံရှာဖွေမှုတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲမေးမြန်းချက် ၂ ခုသည် Elasticsearch / Solr အညွှန်းမှတစ်ခုနှင့်စာရွက်စာတမ်းအိုင်ဒီများမှ post အမျိုးအစားများကိုပြန်လည်ရယူရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိပေမည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကအများကြီးပိုမြန်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဒေတာဘေ့စ်ထဲမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ပို့စ်အမျိုးအစားတွေအမြောက်အများကိုရလာတာနဲ့အမျှ (ထောင်ဂဏန်းအနည်းငယ်အထိထောင်ပေါင်းများစွာအထိ)၊ Elasticsearch / Solr မေးမြန်းမှုသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်သည် WP_Query SQL အပြည့်အစုံရှာဖွေခြင်းထက်။
နှင့် IDs မှ post အမျိုးအစားများကိုပြန်လည်ရယူရန်ဒုတိယ query အရမ်းမြန်သည်၎င်းသည် indexed နေသော table fields ids များကိုမေးမြန်းသောအခါ၊
အဆိုပါခက်ခဲအလုပ်, အပြည့်အစုံရှာဖွေရေးဖြစ်ပါတယ် Elasticsearch / Apache ကို Solr အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်ရုံအဘို့တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သော။
သင်၏ WordPress ရှာဖွေမှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
MySQL သည်ဒုတိယအတန်း၏တတိယမြောက်ကက်ဘိနက်ကိုရယူနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် "MySQL စာသားများနှင့်သိပ်မကောင်းပါ" ခေါင်းစဉ်ပါသောဖိုင်ပါ ၀ င်သောကက်ဘိနက်ကိုထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
WordPress ကိုလုံး ၀ MySQL ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ စာမျက်နှာများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစာသားဖြင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် MySQL သည် Relational Database တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသတ်မှတ်သူမှဒေတာရယူရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ post ကို ID '345678' နှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော image ID များနှင့်ပြန်လည်ရယူပါ။
၎င်း၏စာသားပါအကြောင်းအရာများမှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်းကို“ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ” ရှာဖွေခြင်းဟုခေါ်သည်။ MySQL သည်အပြည့်အစုံရှာဖွေရေးတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘယ်သောအခါမျှမတည်ဆောက်ခဲ့ပါ။
ထို့ကြောင့် MySQL (နှင့် WordPress) တွင်ရှာဖွေခြင်းသည်နှေးကွေးပြီးတိကျမှုမရှိပါ။
သင်၏ MySQL ရှာဖွေမှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
သင်၏ရှာဖွေနိုင်သည့်အကြောင်းအရာကို WordPress တွင်စာသားအတိုများ၊ ဝါကျတိုများဖြင့်ရေးသားသည်။
၎င်းသည်စာမူခေါင်းစဉ်များ၊ စာမူများ၊ တံဆိပ်များ၊ အမျိုးအစားများ၊ ထုတ်ကုန် attribute များတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ နောက် ... ပြီးတော့။
မှန်ကန်တဲ့ကိရိယာကဒီစာသားတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီး the ည့်သည်ရဲ့စုံစမ်းမှုနဲ့ကိုက်ညီရမယ်။
“ Yellow socks” ကိုရှာဖွေနေသော or ည့်သည်သည်အချက်အလက်ကို WooCommerce အရောင် attribute အဖြစ်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းရှိမရှိကိုဂရုမစိုက်ပါ။
ပြီးတော့“ မြန်ပြီးတိကျမှု” ဆိုတာကစာသားအပြည့်အစုံရှာဖွေခြင်းပဲ။ မတူကွဲပြားသောစာသားအမြောက်အမြားကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ စုံစမ်းမှု၏သော့ချက်စာလုံးများနှင့်တိကျစွာကိုက်ညီနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခု။
စာလုံးအပြည့်ရှာဖွေခြင်းသည် "Focus" သို့မဟုတ် "Focuses" ပါသည့်စာမူသို့မဟုတ်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုထိရောက်စွာပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
Solr နှင့် Elasticsearch၊ အခမဲ့ open-source full-text software, ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်များ။
WPSOLR နှင့် WordPress နှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်သူတို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Solr သို့မဟုတ် Elasticsearch - အပြည့်အဝစာသားကိုချန်ပီယံ
Apache Solr နှင့် Elasticsearch တို့ဖြစ်ပြီးချန်ပီယံနှစ်ယောက်ကအခြားသူများထက်သာသည်။
နှစ် ဦး စလုံးအတူတူပင် "Lucene" အင်ဂျင်ကိုအတူတူ။
နှစ် ဦး စလုံးအမြန်နှုန်းနှင့်ရှာဖွေရေးတိကျမှန်ကန်မှုအဘို့တည်ဆောက်နေကြသည်။
ဘာသာစကားနှစ်ခုစလုံးကိုဘာသာစကား ၅၀ ဖြင့်ဘာသာစကား၊ အသွင်အပြင်များ၊ ပြောရလျှင်၊ အဘိဓာန်၊ နောက် ... ပြီးတော့။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ WPSOLR plugin ကြောင့် bot သည် WordPress နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားပလပ်ဂင်များမလုပ်နိူင်ပါ။ Elasticsearch ကိုပြင်သစ်လိုရှာနိုင်သည်၊ ဂျပန်ကို Solr ဖြင့်ရှာဖွေသည်။
Elasticsearch သို့မဟုတ် Solr ကို Fortune 500 အနေနှင့်စမ်းကြည့်ပါ
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော plugins များသည်သင်၏ရှာဖွေမှုနှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဆင့်အတန်းတစ်ခုအထိသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ကျနော်တို့အခြားသူများ amont ဖော်ပြထားခြင်းနိုင်ပါတယ်:
- AJAX Search Pro
အကြောင်းပြချက်မှာသူတို့သည်သင်၏ရှာဖွေရေးကိုကူညီရန် MySQL ကိုအသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ရှာဖွေရေးသည် MySQL ရဲ့အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။ ဒေတာအလွန်များများရှာဖွေသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) သင်၏ site ပေါ်တွင် visitors ည့်သည်များများလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ပြိုကွဲလိမ့်မည်။ ဘယ် visitors ည့်သည်တွေပိုလိုချင်တာလဲ။ မကောင်းဘူးလား။
သို့သော် Elasticsearch သို့မဟုတ် Solr တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အမြန်နှုန်းတို့တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို ၂ လုံးသည်ရာပေါင်းများစွာသော developer များကကုဒ်လိုင်း ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်သာလျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် WPSOLR သည်ဘီးကိုပြန်လည်တီထွင်မည့်အစား Elasticsearch နှင့် Solr ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သတိရပါ၊ သင်၏ရှာဖွေမှုအားသင်၏ရှာဖွေမှုကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည်ကိုသတိရပါ။ အလကား!
WPSOLR သည်အကောင်းဆုံးရှာဖွေရေးနည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘီးကိုပြန်လည်တီထွင်မည့်အစား။
WPSOLR ဖြင့်ကြီးမားသောရှာဖွေခြင်းနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာငယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ပလပ်အင်အသေးစား၏စျေးနှုန်းဖြင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီရှာဖွေမှုကိုရယူပါ။
SaaS hosted search ကိုသင်ဘာကြောင့်မသုံးနိုင်ပါလဲ
SaaS မှလက်ခံထားသောရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများသည်အလွန်သေးငယ်သော site တစ်ခုသို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ကြီးများရှိပါကအလွန်ကောင်းသည်။
၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်းသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံသည် - အချက်အလက်“ အညွှန်းကိန်း” (သိမ်းဆည်းထားသည့်) အရေအတွက်၊ မေးမြန်းချက်အရေအတွက်၊ ရလဒ်အရေအတွက်၊ သင့်အချက်အလက်များ၏ပုံတူပွားအရေအတွက်။ နောက် ... ပြီးတော့။
ထို့ကြောင့်သင့်တွင်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိပြီး visitors ည့်သည်အနည်းငယ်သာရှိပါက၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသည်။
သို့သော်သတိပြုရန်မှာ crawler သည် GoogleBot သို့မဟုတ်အခြား bot များကဲ့သို့သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့လာသောအခါ၎င်းသည်မွန်အကုန်တွင်သင်၏ hosted bill ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
သင့်မှာအိတ်ကပ်ကြီးတွေရှိရင်၊ သငျသညျအင်္ဂါရပ်များပိုမိုချင်သည်အထိ, သင့်ရဲ့ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုစိတ်ကြိုက်: သင် box ကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝန်ဆောင်မှုကို hosted နှင့်သင်နောက်ကွယ်မှ "အင်ဂျင်" ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။
ထို့အပြင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအများစုသည် WordPress သို့မအပ်နှံပါ။ ၎င်းတို့သည် Drupal, Magento သို့မဟုတ် HTML ဆိုဒ်များအပါအဝင်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ WordPress ပရိယာယ်များကိုနားလည်မှုသည်အပေါ်ယံဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည် WordPress ပလပ်အင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမွမ်းမံထားသောသို့မဟုတ်မွမ်းမံထားသောပလပ်ဂင်တစ်ခု၏အရိုးစုကိုပင်မပေးနိုင်ပါ။
WPSOLR ဖြင့် Elasticsearch နှင့် Solr တို့၏ကျေးဇူးကြောင့် hosted search ၏ power engine ကိုရရှိသည်။ သို့သော်သင်၏ဆာဗာတွင်၎င်းတို့ကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းထားသည်။ SaaS ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းစာလျှင်စျေးနှုန်းသည် ၁၀ ဆမှ ၁၀၀ ထက်နည်းနိုင်သည်။
စာရွက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်တည်းတည်း visitors ည့်သည်အနည်းငယ်သာရှိသောအလွန်စျေးကြီးသောဆာဗာတွင်မြန်ရန်လွယ်ကူသည်
အကယ်၍ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသို့မဟုတ်ရာထောင်ချီ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကဲ့သို့ WooCommerce ထုတ်ကုန်များရှိလျှင်ကော။
Black သောကြာနေ့မှာရာနဲ့ချီတဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်း visitors ည့်သည်တွေရုတ်တရက်ရောက်လာရင်မင်းရဲ့ရှာဖွေမှုကသင့်ရဲ့ဆာဗာကိုပြိုကွဲစေမယ်ဆိုရင်ကော။
အကယ်၍ သင့်ထံတွင်လစဉ်စျေးကြီးသည့်သီးခြား hardware (သို့) hosted ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ထောင်နှင့်ချီ။ သုံးစွဲရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိသေးပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
၀ ယ်သူအချို့သည်ရာနှင့်ချီသောထုတ်ကုန်များ၊ ပို့စ်များ၊ ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြသည်။
၀ ယ်သူအချို့သည်နေ့တိုင်းရာနှင့်ချီသော visitors ည့်သည်များ ၀ င်ရောက်မှုနည်းပါးသည်။
WPSOLR သည်စျေးပေါသော hardware လိုအပ်သည်။
WPSOLR သည်စာရွက်စာတမ်းအမြောက်အများကိုများစွာသော with ည့်သည်များနှင့်အတူစျေးပေါသောဟာ့ဒ်ဝဲတွင်ရှာဖွေပြီးစာရင်းသွင်းထားသည့်သေးငယ်သည့်ပမာဏအတွက်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်း
© 2020 wpsolr.com ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။